Opera neVPN yayo: mhinduro yakachengeteka chaizvo? | Linux Vakapindwa muropa
Iko kudiwa kwe iva neVPN iri kuwedzera (zvimwe ikozvino ne teleworking), sezvo ivo vachikupa iwe yakavharidzirwa yekutaurirana chiteshi uye ichaita kuti iwe uwedzere kusazivikanwa nekuvanza yako chaiyo IP. Uye zvakare, masevhisi aripo anowanzo kupa zvakavanzika zvakawanda, pasina matanda ezvaunoita. Nekudaro, masevhisi aya anobhadharwa (aripo mahara, asi haana kuvimbika zvachose), uye ndipo panogona kuve neOpera webhu browser iyo inogona kuve inonakidza imwe nzira.
Este web browser Haisi seinoshandiswa zvakanyanya seChannel kana Firefox, asi inochengetedza huwandu hwakanaka hwevashandisi. Uye zvakare, inowanikwa yeLinux natively uye inoshanda chaizvo mushe. Kubva vhezheni Opera 40, yemahara VPN sevhisi yebrowser iyi yakaitwawo, kuti igoshanda paGNU / Linux distros.
Muchikamu chino zvinowanzotaurwa kuti kana chimwe chinhu chiri yemahara (freeware), chigadzirwa ndiwe. Uye ivo vanowanzove vanobudirira chaizvo. Kazhinji, kunze kwenyika yepachena uye yakavhurwa sosi software, apo zvirongwa nemasevhisi zvinopihwa mahara, zvinowanzoitika nekuti vanoita purofiti nekutengesa data rako.
Kune avo vese vanofunga kushandisa iyo Yemahara Opera VPN, kutaura kuti zvinogona kunakidza kunyorera traffic uye kuwana chiteshi chakachengetedzeka pane kufona zvakajairika. Uye zvakare, sevhisi iyi inopa zvishoma kuvimba kupfuura mamwe emahara maVPN masevhisi ayo vanopa ayo akatonyanya kuzivikanwa uye kusavimbika.
Asi, kana iri imwe nzira kana iwe usiri kuda kubhadhara VPN, hazvireve kuti ndiyo imwe nzira yakanaka. Muchokwadi, kana iwe uchitsvaga yakakwira dziviriro, iwe zvirinani sarudza kubhadhara yeVPN sevhisi. Kazhinji hazvidhure, uye uchave nekuvimba kwakanyanya. Chikonzero ndechekuti ne Opera sevhisi, traffic inotenderera nemaseva ekambani ino, saka, inogona kuve bakatwa rinocheka nekwose:
Kana HTTPS ichishandiswa, sevha yeiyi VPN haizomboziva iyo data iri kuendeswa, asi ichaziva neHTTP.
Panyaya yekubatana, sevha ichaziva kubva kune iyo ISP yawakabatana uye nemasaiti auri kushandisa. Ipo iyo ISP ichingoziva chete kuti iwe wakabatana neVPN server. Ndokunge, iwe wakangochinja yako server data ...
Opera maseva haasi mumutemo "nzvimbo" sedzimwe dzakabhadharwa VPN, asi asi maseva avo anotambirwa muCanada, zvinoreva.
Inongo chengetedza traffic kubva kubhurawuza, uye haizodziviriri traffic kubva kune mamwe maapplication anobatana kunetiweki, sekubhadharwa kweVPN.
Muchidimbu, gara uchifunga kuti Opera's VPN yemahara, iri nyore kumisikidza kubva kubhurawuza pachayo, asi kuti hapana zviripo proxy kuendesa data kuburikidza nemaseva avo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Opera neVPN yayo: mhinduro yakachengeteka chaizvo?
Juan Reyes Guerrero anobva kuElizondo akadaro
Ndinoishandisa mazuva ese
Pindura Juan Reyes Guerrero kubva kuElizondo
VLC 3.0.13 inosvika ichivandudza rutsigiro rweMP4 uye HLS hova